Uru Banking Banyere Nzuzo, Nzuzo, Ụgwọ na Ntọala Akaụntụ
Swiss Banking enwewo ihe jikọrọ ya na ndị ọkachamara, ndị nwere uche, ndị na-echekwa ego. Ọ bụ aha a ma ama maka nnọpụiche na ịgbaso ụkpụrụ nke ụlọ akụ na nzuzo. Ndị mmadụ na-agakarị na Switzerland maka ihe abụọ kpatara ya. Nke mbụ, ọtụtụ ndị na-achọ ichebe akụ bara uru site na nyocha ihu ọha. Nke abụọ, ọtụtụ ndị mmadụ na-aga Switzerland iji wepụ ibu arọ nke ụtụ isi. Ulo oru abuo a na-ele anya na ndi oru nchekwa ego Bank Bank dika ihe di oke mma.
Ma ọrụ ndị a abụghị ihe ọhụrụ. Akwụkwọ ndekọ ego nke Switzerland abụwo onye ndú n'ime akụ na ụba ụwa maka ọtụtụ iri afọ. Nke a na-ekele n'egbughị oge na ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na esemokwu obodo gburugburu ụwa. Ha abụrụla ndị isi na nchekwa ego ma kwụsie ike maka ọtụtụ narị afọ. N'ezie, ụwa ahụwo nke a site n'oge Louis nke iri na abụọ. Ọzọkwa, ọ nọgidere na ụbọchị ndị na-esote mgbanwe nke French ma na-abanye ma Agha World. Ichebe akụ na isi obodo site na ụtụ isi ma ọ bụ ndị ọchịchị na-emechi ọnụ bụ ihe jikọrọ ya. N'ihi ya, onye na-enyocha ego ahụ legara Switzerland iji nye ndị ọrụ ahụ.
Ihe kpatara na ụlọ akụ Switzerland etolitela nke a mbupụ ala aha a bu ihe a. Ọ bụ onye kachasị elu dabere n'eziokwu ahụ bụ na Switzerland nwere iwu na ụkpụrụ dị oke elu. Latlọ omebe iwu na-ekwupụta usoro akọwapụtara maka ụlọ akụ ya. Ọzọkwa, ha na-akwado ichebe na nzuzo nke akaụntụ ya na-edebe nke ndị mba ọzọ, ebe enwere ike. Bawanyewanye aha a bụ na ụlọ akụ Switzerland na-enye ọrụ ọkachamara na-enweghị atụ. Ọzọkwa, ha gosipụtara ntụkwasị obi kpam kpam na gburugburu ebe obibi akụ kachasị mma n'ụwa.
Akụkọ Banyere Banyere Banye Banyere Banyere Ya
Oge nke oge nzuzo nzuzo Banyere Banyere Banyere Banyere Ịzụ Banyere Banyere Iche Banyere Banyere Banyere Iwu Banyere Banyere Banyere Banyere Banyere 1934. Gọọmenti ha mere iwu ahụ n'ụzọ dị ukwuu n'ihi na egwu ndị Nazi Germany na ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na France. Ulo oru abuo gbaliri igbanye ulo oba Bank nke Swiss ka ha weputa ihe ndi ozo n'aha "ezi ala."
Switzerland nabatara iwu Banking Banyere 1934. Iwu a kwuru n'ụzọ doro anya ụkpụrụ iwu nzuzo. O nyekwara nkwado iwu maka ndị dị otú ahụ. N'ikpeazụ, ọ na-enye maka ndị omempụ na ndị na-emebi nzuzo nke akwụkwọ ndekọ ego. Nke a mere ka ọnọdụ a dị ugbu a (ma tinye ebe a) na-agbaso iwu na ụkpụrụ dị ka ihe na-adịghị agbanwe agbanwe. Nke ahụ bụ, n'ihe banyere nkwụnye ego na nzuzo nzuzo, na njirimara nke ndị na-edebe ego na akaụntụ. Ha anaghị ewepụ akụkọ gbasara akụ na ụzụ. A ghaghị inwe ebubo mpụ dị ukwuu n'ihu ụlọ ọrụ gọọmentị, karịsịa onye mba ọzọ, nwere ike ịbịaru ọta nzuzo a.
Ọbụna ebubo nke ịkwụsịtụ ụtụ isi agaghị ezuru iji nweta iwu nzuzo nke ụlọ akụ Switzerland. Ihe ebubo ahụ abụghị ihe dị oke njọ na Switzerland, nke na-abaghị uru ọ bụla ma ọ bụghị ihe ọjọọ. N'ezie, ezughị ezu imebi iwu ya. Ebubo ahụ aghaghị ịbụ nke dị oké njọ ka ụlọ akụ nke Switzerland wee chee na ọ ga-emebi iwu ya. Nke ahụ kwuru, anyị na-atụ aro ka ụtụ isi kwadoro ikike gị na ebe obibi na / ma ọ bụ ụmụ amaala.
Site na ọtụtụ atụmatụ ma ọ bụ usoro, ụlọ akụ Switzerland nwere ụyọkọ nke atọ nke ego niile ederede mba. N'ileba anya na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke Offshore, ndị ọchịchị na-adị adị, nke a bụ onye dị ịrịba ama. Ụlọ akụ Switzerland na-ejide ihe dị ka puku dolla $ 2 na United States bụ nkwupụta eziokwu. Ya mere, Switzerland ka bụ ụkpụrụ zuru oke ma a bịa n'inye ụlọ ọrụ nchekwa ego.
Ọnụ ego Bank Bank Bank
Ihe ndekọ ego a na-akpọ "ọnụ ọgụgụ" ejirila na-ekwu okwu bụ ihe ọzọ karịa akaụntụ nke ọnụọgụgụ. Ọnụ ọgụgụ karịa onye na-edekọ aha na-egosipụta akaụntụ ahụ. Ụlọ akụ Switzerland na-edozi ụkpụrụ maka nzuzo ya na ndekọ ha. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ ghaghị ịbụ onye a kpọtụrụ aha aha ya na akaụntụ ejiri. Ma ụlọ akụ ahụ nwere njide aka. Ọ bụ amaghị ma ọ bụ ndị isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego na ụlọ akụ Switzerland.
Ihe ndekọ ndị a doro anya na-enye nchekwa dị omimi karị. Dịka ọmụmaatụ, ha nwere ike ịba uru maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ a ma ama na njedebe nke ịnweta nnukwu ihe. Enwere ike inwe azụmahịa ebe ọ dị mkpa iji kpokọta akụ na ụba n'ebughị n'uche ndị na-asọmpi, ndị mgbasa ozi, ma ọ bụ ndị ọzọ na-emegide ndị mmadụ. Otu ihe kwesiri ido anya site na akwukwo a di n'elu. Ọbụna n'ụlọnga ụlọ akụ dị na Switzerland, ụlọ akụ enweghị ike ikwenye na enweghị aha ha; karịsịa na ihe ndị omempụ. Ma ọnụahịa ndị a denyere aha na Switzerland dị nso dịka akaụntụ nwere ike imezu oke uche.
Switzerland Banking Taa
Ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị toro eto nwere ike ịnwụ ma nwụọ na teknụzụ mgbanwe. Enwere ike ịnwe usoro nke mebiri nzube ha ma ọ bụ usoro ha. Nke a abụghị ihe gbasara ụlọ ọrụ ụlọ akụ Switzerland. Ụlọ akụ na-azụ ahịa nke Switzerland agbanwewo ngwa ngwa n'ihi mgbanwe nke nkà na ụzụ nke ụwa nke oge a. Site na inyefe ego na kọmputa, na teknụzụ nchebe nke mega-bit, banks nke Switzerland na-ebute ụzọ n 'ụlọ ọrụ ego. Ọtụtụ na-apụnahụ bụ ụbọchị nke kaadị mbinye aka siri ike na nnọkọ na-aga n'ihu. A na-edochi ha ugbu a ka ọ bụrụ na ha na-eji akara eletrikiiki na eletrikiiki na "internet" nke internet. tax akụkụ nke egwuregwu ahụ taa. Ụkpụrụ ego ịgba chaa chaa nke mba ụwa na-anọ n'ọnọdụ iji mee ka ụmụ okorobịa na ndị ọjọọ ahụ pụọ.
Na mmalite nke Ụkpụrụ Nkwado Ụtụ Isi Akaụntụ Mba Ọzọ (FATCA) na United States, ụlọ akụ ndị chọrọ ịnye ego ego nke US aghaghị inye nghọta maka ụtụ isi maka ndị na-edekọ akaụntụ US. Nzuko omeiwu nke United States mere iwu na March 18, 2010 (26 USC § 6038D) wee gbasaa ya na December 31, 2012 (26 USC §§ 1471-1474). Ebumnuche bụ iji mezuo nchịkọta ụtụ mba. Otu nnyocha site na Texas A & M kwubiri na omume ahụ ga-emepụta ihe na-erughị $ 2.5 maka mkpụrụ ego maka oge 11. (Nke a bụ ihe megidere atụmatụ atụmatụ mbụ nke $ 8.7 na otu oge ahụ.) Otu akụkọ dị na Forbes, na-egosi na ụlọ ga-akwụ FATCA n'oge ahụ ga-efu $ 8.
N'ihi nnukwu ụgwọ nke nnabata, ọtụtụ bank ndị dị na Switzerland kpebiri na ha agaghị anabata ndị ahịa nke United States. Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ ụlọ akụ dị na Switzerland ndị nabatara ndị ahịa US. Ya mere, iji kwụọ ụgwọ a, akụ ndị nabatara ndị America nwere ihe nkwụnye ego kachasị mkpa maka ha na gburugburu $ 250,000 na $ 1 nde US.
Taa, ụlọ akụ Switzerland na-arụkwa ọrụ dịka ụlọ ụlọ akụ. Ha na-eji ụfọdụ n'ime ndị ọkachamara ego. Ya mere, e nwere nhọrọ ịzụ ahịa, agbụ, ego ego na ọla ndị dị oké ọnụ ahịa n'ịntanetị. N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ịnweta ọkachamara ego ịzụ ego na-elekọta folda gị.
O doro anya na ụlọ akụ Switzerland na-anọgide na-enye ezigbo ụwa, ihe ngwọta nwere ike ịchọta ọtụtụ nsogbu chere ndị ọchụnta ego ma ọ bụ nwanyị nwere ihe ịga nke ọma taa ihu; karịsịa mgbe a bịara n'ịchebe akụ mmiri mmiri ha. Ma ọ bụ nchebe site na iwu na-adịghị mma, ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị, amaghị ihe akụ na ụba, ma ọ bụ ọbụna di na nwunye mbụ, akwụkwọ ndekọ ego Banyere Switzerland nwere ike ịbụ ihe ngwọta ị na-achọ.
<Isi nke 11
Iji daashi isi>